७ किसिमको हुन्छन् यौ न साथी, तपाईका साथी कस्ता ? – jagritikhabar.com
७ किसिमको हुन्छन् यौ न साथी, तपाईका साथी कस्ता ?
दाम्पत्य सम्बन्ध कति सुमधुर छ भन्ने कुरा उनीहरुको यौ-न जीवनले पनि निर्धारण गर्छ । सफल यौ-न जीवनले दम्पतीको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने मात्र होइन, निरोगी पनि हुन्छ । तर, यसका लागि त्यो यौ न क्रि’या रचनात्मक र सक्रिय हुनुपर्छ ।
यौ नका बिभिन्न तौर तरिका, विधी हुन्छन् । शारी-रिक तथा मान-सिक त-नाव हटाउने विधी पनि हो, यौ-न । यौ-न शा-रीरिक क्रि’या भएपनि यसमा भावना जोडिएको हुन्छ । त्यसैले यौ-न क्रि’या र त्यसबाट लिने स न्तु’ष्टि सबैमा एकरुपता हुँदैन । खासगरी पा र्टनरको सोचाई, बुझाई आदिले यसमा खास भूमिका खेल्छ । किनभने, यौ-न साथी एकैखाले हुँदैनन्, धेरै थरीका हुन्छन् ।
‘कतिपय अवस्थामा सबैकुरा ठीकठाक भएर पनि दम्पती यौ नमा उदासिन हुन्छन् ।’ जो पार्टनर यौ नमा उदासिन हुन्छन्,
याै-नसाथीको प्रकार –
कति दम्पती यस्ता हुन्छन्, जसको यौ न जीवन एकदमै खल्लो हुन्छ । कामको बोझ, पारिवारिक त’नाव, रो’ग, सम्बन्ध अदिको कारण उनीहरुमा यौ नप्रति कुनै रुची हुँदैन । यौ न मनोविज्ञहरु भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा सबैकुरा ठीकठाक भएर पनि दम्पती यौ नमा उदासिन हुन्छन् ।’ जो पार्टनर यौ नमा उदासिन हुन्छन्, उनीहरुले आफ्नो यौ न क्षमता पनि गुमाउँछन् । यौ’न उदासिनताले पार्टनरबीचको सम्बन्धमा समेत खटपट ल्याउन सक्छ । कतिले चाहि आफ्नो यौ न इ’च्छा दबा’एर बस्छन् ।
यस्तो दम्पती यौ न स’म्पर्कका बेला निकै म’स्ती गर्छन् । पार्टन’रलाई उ त्ते’जित गराउनका लागि अनेक जुक्ति निकाल्छन् । साथै आफ्ना पा र्ट’नरबाट पनि यस्तो अपेक्षा गर्छन् कि, उनले पनि यौ नमा स’क्रियतापूर्वक सहभागी जनाओस् । यस्ता दम्पती यौ न सम्ब’न्धको क्रममा यस्तो से’क्स अल फ्यान्टासीबाट प्रेरित हुन्छ । उनीहरुको यौ’न जीवन सफल र स’न्तुष्ट हुन्छ ।
यस्तो दम्पती यौ न स म्ब’न्धका क्रममा भावनात्मक रुपले पनि आपसमा जोडिने प्रयास गर्छन् । उनीहरुको लागि शा री’रिक क्रि’या दोस्रो प्राथमिकताका विषय हुन् । उनीहरुको लागि यौ न एउटा माध्याम हो, आफ्ना पार्टन’रसँग सम्ब न्ध बनाउने । यस्तो दम्पतीले यौ न स म्प’र्कका लागि आफ्ना पार्टनरलाई कहिल्यै दवाव दिदैनन् । उनीहरु मिलनसार र समझदार हुन्छन् । उनीहरु यौ न सम्प’र्कका क्रममा पनि एकअर्काको सन्तुष्टिमा बढी केन्दि्रत हुन्छन् ।
यस किसिमको दम्पती जीवनलाई सुमधुर र सुखद बनाउने विधीको रुपमा यौ नलाई लिन्छन् । उनीहरु आफ्नो दैनिक जीवनयापनका क्रममा आइपर्ने झ’न्झट, त’नाव आदि हटाउनका लागि यौ नको साहारा लिन्छन् । साथै यौ न जीवन सफल बनाउन योग, व्यायाम, ध्यान गर्छन् । उनीहरुको सोचाई हुन्छ कि, यौ’न नै तना’व कम गर्ने राम्रो औषधि हो ।
यौ नमा ल’त भएका पा’र्टनर
पा’र्टनरले रुची राखोस् वा नराखोस्, परिस्थिती अनुकुल होस् वा प्रतिकुल, उनीहरु वेप’र्वाह यौ नमा तल्लिन
कुनै दम्पती यस्ता हुन्छन्, जसले यौ नलाई सर्वोपरी ठान्छन् । मौका पाउनसाथ उनीहरु यौ नको आ’नन्द उठाउन छाड्दैनन् । पा’र्टनरले रुची राखोस् वा नराखोस्, परिस्थिती अनुकुल होस् वा प्रतिकुल, उनीहरु वेप’र्वाह यौ नमा तल्लिन हुन रुचाउँछन् । यस्ता पार्टनर आफ्नो सन्तु’ष्टिमा केन्दि्रत हुन्छन् ।
यस्ता दम्पती का’मुक प्रवृत्तिका हुन्छन् । उनीहरुमा यौ नको इ’च्छा एकदमै तिब्र हुन्छ । उनीहरुको स’म्बन्ध जहिलेपनि तातिरहेको हुन्छ । यौ न मनोविज्ञका अनुसार यस्ता दम्पतीले यौ’नलाई नै महत्वपूर्ण हिस्सा ठान्छन् । यहि कारण यौ न सम्ब’न्धका क्रममा उनीहरु आ’क्रमक पनि हुने गर्छन् ।
बेडरुममा आफुले जे चाह्यो पा’र्टनर त्यही अनुरुप प्रस्तुत भइदियोस् । हरेक यौ न क्रि’या उनी आफ्नो ढंग
केहि यस्ता यौ न साथी हुन्छन्, जो शा री’रिक स’म्बन्धका बेला केवल आफ्नो सन्तु’ष्टिलाई मात्र ध्यान दिन्छन् । उनीहरु चाहन्छन् कि, बेडरुममा आफुले जे चाह्यो पा’र्टनर त्यही अनुरुप प्रस्तुत भइदियोस् । हरेक यौ न क्रि’या उनी आफ्नो ढंग र रुची अनुसार गर्न चाहन्छन् । पार्टनरको खुसी र सन्तुष्टमा कतिपनि ध्यान दिदैनन् ।
यो पनि- इन्स्टाग्रामबाट अबदेखि चार घण्टा लाइभ गर्न मिल्ने
फोटाहरु राख्न मिल्ने सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा अबदेखि चार घण्टासम्म लाइभ गर्न मिल्ने भएको छ ।
यसअघि एक घण्टा मात्रै लाइभ गर्न मिल्ने व्यवस्था रहँदै आएकामा अबदेखि चार घण्टासम्म लाइभ गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न लागिएको सो कम्पनीले घोषणा गरेको छ ।
थप गर्न लागिएको सेवा इन्स्टाग्रामका सबै प्रयोगकर्ताहरुले विश्वभर जुनसुकै ठाउँबाट पनि प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् ।
नयाँ व्यवस्थाले विशेष गरेर योगा र गीत–संगीत आदिको भिडियो लाइभ गर्न चाहने, कलाकार, पकाउने कार्यमा संलग्नहरुलगायतलाई फाइदा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसबाहेक लामो भिडियो बनाउन मिल्ने कार्यमा लागेकाहरु वा त्यस्तो प्रसारण गर्न चाहनेहरुलाई उपयोगी हुने कम्पनीका अधिकारीहरुले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
‘तपाईंको भिडियो आर्काइभमा राख्न सकिन्छ, त्यो तीस दिनसम्म मात्रै रहन्छ, आर्काइभमा भएको बेलामा तपाईंले मात्रै हेर्न सक्नुहुन्छ,’ इन्स्टाग्रामद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
आर्काइभमा भएको भिडियोलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो डिभाइसमा राख्न पनि मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । इन्स्टाग्रामले यो विशेषता अहिले नै लागु भइनसकेको र चाँडै नै लागु हुने पनि जानकारी दिएको छ ।